Uyifumana njani iAkhawunti yeKhadi letyala - Iindidi E Credit Cards
Uyifumana njani iAkhawunti yeKhadi letyala
Hlala wangoku kunye akhawunti yakho.
Ngaba unomdla wokufumana iindlela ezahlukeneyo zokufikelela kwiakhawunti yakho yetyala leSears? Zintathu iindlela zokwenza njalo: kwi-Intanethi, ngefowuni nangobuqu.
Iindidi zeSears Ukufikelela kwiAkhawunti yeKhadi letyala
Ukufikelela kwiAkhawunti kwi-Intanethi
Ukufikelela kwiakhawunti kwi-Intanethi kubonelela ngenani lezinto eziluncedo ekulawuleni iKhadi lakho leeSears. Ukufikelela kukhululekile, nangona kuya kufuneka ubhalise ikhadi lakho ukuze usebenzise le nkonzo.
Ukubhalisa ikhadi lakho, yiya ku Akhawunti Online.com kwaye uchwetheze inombolo yeakhawunti yakho.
Nje ukuba ufake inombolo yakho yeakhawunti, uya kucelwa inombolo yoKhuseleko lweNtlalontle yomnini wekhadi, umhla wokuzalwa waloo mntu kunye nekhowudi ye-zip yedilesi yetyala.
Ungafaka nedilesi ye-imeyile, ukufumana izilumkiso malunga neakhawunti yakho kunye nolunye ulwazi, kodwa oku kukhethwe ngokupheleleyo.
Nje ukuba uyigqithise kwiscreen solwazi lweakhawunti, lixesha lokuba usete iakhawunti yakho ekwi-intanethi.
Okokuqala, kuya kufuneka uchwetheze i-ID yomsebenzisi kunye negama lokugqitha ukuze ungene ngokulula kwiakhawunti yakho kwixesha elizayo.
Uya kuthi emva koko ucelwe ukuba ukhethe imibuzo emibini yokhuseleko ukuqinisekisa ukuba nguwe kuphela onokufikelela kwiakhawunti yakho.
Okokugqibela, uya kucelwa ukuba ungeze ezinye iinkcukacha ezongezelelweyo malunga neakhawunti yakho. Nje ukuba ucofe uqhubeke, oku kugqiba ubhaliso lwakho.
Ezona ndlela zibalaseleyo zokuDibanisa amatyala ekhadi letyala
Iindlela ezintlanu zokufumana amanqaku amahle okuthenga ngetyala
Uyakha njani iMbali yeKhredithi
Emva kokuba ubhalisile ngokubonelela ngenombolo yakho yeakhawunti kunye nolwazi lomntu siqu, ungangena usebenzisa igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha olilelayo.
Nje ukuba ungene, unokujonga i-akhawunti yakho eseleyo.
Unokujonga kwakhona iingxelo kunye nokuthengiselana kutshanje, okunokucwangciswa ngumhla okanye isixa.
Ukuba ufuna ukufikelela kwiingxelo ezindala, unoku-odola iiPDF ngokuthe ngqo kwi-intanethi kwaye uzise kwifolda yemiyalezo yeakhawunti yakho ekwi-intanethi. Olu luphawu olukhulu ukuba awukwazi ukulandelela ingxelo zeakhawunti ezindala.
Unokwenza neentlawulo kwi-Intanethi, ujonge imbali yakho yokuhlawula, kwaye ufumane ulwazi malunga nenzala kunye nezoqoqosho.
Kuyenzeka ukuba uthethe nommeli weenkonzo zabathengi malunga nekhadi lakho leeSears. Ukwenza njalo, ungabeka umnxeba kwiziko lokunyamekela abathengi malunga nohlobo oluthile lweakhawunti onayo. Iinombolo zoqhakamshelwano kwiiakhawunti ezahlukeneyo zezi:
Ikhadi leSears: 800-917-7700
Iimpawu zoRhweboOne: 800-599-9712
I-Sears enkulu ngaphakathi kwi-MasterCard: 800-823-7879
Iakhawunti yokuPhucula iKhaya laseSears: 800-366-3817
Olu lwazi lukwabonelelwa, kunye neenkcukacha zonxibelelwano ezongezelelweyo, ngokusebenzisa i Iwebhusayithi yeKhadi leSears .
Unokufikelela kwikhadi lakho ngokuya kuyo nayiphi na ivenkile yeSears. Ungalihlawula ityala lakho buqu okanye ujonge ibhalansi yakho usebenzisa le ndlela. Oku kulunge ngakumbi ukuba usesitolo kwaye awukwazi ukufikelela kwifowuni okanye kwikhompyuter. Yiya nje kwidesika yeenkonzo zabathengi okanye nakweyiphi na irejista yemali kwaye uchaze ukuba ungathanda ukwenza ntoni. Uya kuyidinga inombolo yakho yeakhawunti okanye isazisi esifanelekileyo ukuze iarhente yenkonzo yabathengi ijonge iakhawunti yakho.
Ukukhetha indlela yokufikelela
Eyona ndlela yokufikelela kwikhadi lakho letyala leSears lixhomekeke kwiimfuno zakho kunye nendlela okhetha ngayo ukunxibelelana nenkampani ngokufikelela malunga neeakhawunti zakho. Khetha indlela okhululeke ngayo ukuyisebenzisa.
Ukutya Kukutya Umtshato Wokubonisa Iifoto Iincwadi Ikhaya Umthengi Ukuhlola Umsebenzi Nokuzalwa Komntwana
kungakanani ukutya okumanzi ukondla ikati
njani ukufudumeza iseti yepeyinti
ukucaphula umntu oswelekelwe ngumntu amthandayo
yintoni ukuphakama okuphakathi komntu oneminyaka eli-14 ubudala
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba ikati izale phakathi kweekati